Ugu dambeyntii, iOS 13 wuxuu ka abuuri karaa xasuusin Boostada | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Ugu dambeyntii, iOS 13 wuxuu ka abuuri karaa xasuusiyeyaal Boostada
Ugu dambeyntii, iOS 13 wuxuu ka abuuri karaa xasuusiyeyaal Boostada
Waxaan horeyba u ognahay in Apple ay si buuxda uga gudubtay app-ka Xusuusiyeyaasha ee iOS 13, isagoo ku daray qaab cusub, qaabeyn awood badan, iyo qaar ka mid ah aaladaha gelitaanka degdegga ah ee aad u wanaagsan si aadan u baahnayn inaad taabato shaashadda sida milyan jeer oo keliya inaad xasuusato inaad qaadato. qashinka ka saar markaad guriga tagto.
Laakin Xusuusintu waxay sidoo kale heshay ciddiyihii farsamada gacanta ee macruufka intiisa kale. Maanta waxaan arki doonaa laba isdhexgal oo aad u wanaagsan oo laga yaabo inaadan weli maqlin.
Ka Samee Xusuusin Boostada
Isla markiiba ka samee xasuusin abka boostada
Dhammaan abka abuuri kara xasuusiyayaasha, Boostada waa tan inta badan ay u badan tahay inaan isticmaalo. Ilaa hadda, dariiqa kaliya ee xasuusin uga abuuri kara iimaylka waa in lala hadlo Siri, oo leh "I xasuusi arrintan." Weedhaasi waxay ku dartay iimaylka hadda jira xasuusin ahaan, oo ay ku dhammaystiran tahay xidhiidhinta iimaylkaas. Laakiin taasi waxay ahayd.
Tani waa natiijada aad u yar.
IOS 13, waxaad ku dooran kartaa qoraal iimayl kasta, taabo si aad u wadaagto, ka dibna u dir app Xusuusiyeyaasha, dhammaan adiga oo aan si cad ugu hadlin meel fagaare ah. Tani waxay sidoo kale ka shaqeysaa Safari, marka lagu daro suurtagalnimada hadda la wadaago iyada oo loo marayo badhanka saamiga ugu weyn ee Safari.
Hadda, waxa dhacaya waa in xusuusinta cusub lagu magacaabo mawduuca mawduuca ee iimaylka, oo waxaa jira calaamad boostada oo aad taabsan karto si aad u furto iimaylkii asalka ahaa (ama bogga shabakadda, xaalad Safari). Qoraalka aad dooratay sidoo kale dhab ahaantii waxaa lagu koobiyeeyay xasuusinta, soo daahday (oo la soo dhawaynayo) tan iyo horraantii macruufka 13 betas.
Xusuusin badan oo ku jira Siri
Xulashada cusub ee Spotlight Weydii Siri
Ugu dambayntii, waxaad hal mar ku dari kartaa xasuusiyayaal badan Siri. Markii hore, haddii aad u sheegtay wax la mid ah "Hey Siri, ku dar cajalad duuban, balaastig ah, iyo galoofyada maqaarka ee liiskayga wax iibsiga," markaa waxaad heli lahayd hal gelis liiska wax iibsiga ee dhammaan saddexda shay.
Laba ka mid ah saddexdiiba ma xuma.
Hadda, haddii aad tidhaahdo isla shay, waxaad heli doontaa gelis kala duwan shay kasta. Aragti ahaan, si kastaba. Waxaad sidoo kale ku qori kartaa liiska gudaha bar raadinta Spotlight, oo taabo kan cusub Weydii Siri badhanka si aad u isticmaasho Siri adigoon hadlin.
Xusuusin gudaha iOS 13 iyo iPadOS
Xusuusintu aad bay u badan tahay, aad bay ugu fiican tahay iOS 13. Markii hore, waxaan u isticmaali jiray Xusuusin si gaar ah liisaska wax iibsiga, ama in aan i xasuusiyo inaan waraabiyo bisadda markaan guriga imaado.
IOS 13, Xusuusintu waa faa'iido badan, sababtoo ah a) way ka xoog badan tahay iyo b) aad bay u fududahay in la isticmaalo. Ha iloobin hawsha ka hor intaadan ku guulaysan inaad liiska ku darto. Hal dariiqo taasi waa wax weyn. Mid kale, waa wax lagu qoslo in ay ku qaadatay waqti aad u dheer in halkaan la gaaro.
Jimicsiga ugu Fiican & Jimicsiga Mawduucyada WordPress
Kala saarida 'Codso Xigasho' ee Natiijooyinka Raadinta Google
Sida loo soo dejiyo apps-ka iPhone la'aanteed aqoonsiga Apple ID, aqoonsiga wajiga, ama aqoonsiga taabashada
Fiidiyowga: Hubinta Apple's cusub ee Marxaladda cusub sifada hawl-qabadka badan ee iPadOS 16
CoolStar waxay ku qoslisay Sileo ku shaqeeya iOS 15.1 iyada oo loo sii marayo jeebka jeebka ku salaysan ee tihmstar ee gaarka ah ee checkm8
Hadda waad dhaafi kartaa CAPTCHA: iOS 16 waxay u caddayn kartaa shabakadaha inaad tahay bini'aadam
Miyaan qaadi karin sawirro iPhone ama iPad ah? 9 xal si tan loo hagaajiyo
Sidee Apple's cusub ee 35W ada adabtarada awooda u wadaagaa labada dekedood ee USB-C
Sida loo helo jailbreak tweak .deb files
Ginsu wuxuu ka dhaqaajiyaa dhammaan hagaajinta jebinta Havoc una wareejiyaa kaydka shakhsi ahaaneed, wuxuu ka dhigayaa dhamaantood bilaash
M2 MacBook Air waxyoonay wallpaper
Jailbreaking tweaks ee usbuuca: RunnerPi, BigSurCenter, iyo tidbits kale
Tweek, Grace, SmartFriends iyo apps kale si aad u hubiso todobaadkan
Sida loo koobiyeeyo xiriirada iCloud in Google Contacts isticmaalaya iPhone, iPad, Mac, ama PC
Fiidiyow: Dhammaan astaamaha iPhone ee smart ee ku jira iOS 16 oo ay ku shaqeeyaan sirdoonka Siri
Apple waxay soo saartay 35W Dual USB-C Port Charger laba cabbir, labadaba qiimihiisu yahay $ 59
Sida loo dalbado Apple's M2-powered 13-inch MacBook Pro
Waxaad daabacan kartaa 3D korka iPhone si aad isugu daydo macOS Ventura iyo iOS 16's feature Camera Continuity ka hor inta aan la bilaabin cusbooneysiinta
IOS 16 waxa uu leeyahay beddelka khadka ee lacagaha, heerkulka iyo qaybo kale oo badan
Sida loo qariyo xiriirada iPhone iyo in la hubiyo in aan la arki karin ama la heli karin
Sida loo rakibo beta 16 horumariyaha iOS
Fiidiyowga: IOS 16's shaashadda qufulka ee iPhone-ka ee dib loo habeeyay - muuqaal kasta oo cusub ayaa daboolay!
Siri hadda waxay ku dhawaaqi kartaa wicitaanada iyo ogeysiisyada ku hadasha iPhone-ka
IOS 16 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka saarto kamarada, saacada iyo kaydka Apple apps ka iPhone kaaga
RunnerPi wuxuu ku daraa Pikachu animated Shaashadda Qufulka markii uu ku dallaci doono iPhone-kaaga la jebiyey
Cilmi-baadhaha amniga ee Project Zero Ned Williamson ayaa ku jeesjeesay nuglaanta kernel ee iOS & iPadOS 15.4.1 iyo wixii ka weyn
Sida loo qariyo ama looga saaro dhalashadaada profile kaaga Twitter
Apple waxay u beddeshaa baakad bilaash ah oo loogu talagalay iPhone 12 unug oo la dayactiray
Sida loo maamulo giraangiraha Siri Remote